Puntland. Askar iyo Taliye lagu dhaawacay weerar bambaano – idalenews.com
Puntland. Askar iyo Taliye lagu dhaawacay weerar bambaano
Wararka ka imaanaya waqooyiga magaalada Gaalkacyo, ayaa sheegaya in halkaasi lagu dhaawacay 5-Askari oo la sheegay in waxyeelo ay ka soo gaartay Bambooyin lagu weeraray saldhigga booliska maamulka Puntland ee xaafadda Horumar.
Jaamac Maxamed Taliyaha qeybta booliska gobolka Mudug ee maamulka Puntland, oo Weerarkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in Khasaaraha Weerarka uu yahay mid aan sidaa u buurneyn, waxa uuna sheegay in Maamulka ay baadi goob ugu jiraan raggii weerarka geystay.
Sidoo kale, Jaamac Maxamed ayaa waxa uu sheegay in dadka dhaawacmay uu ku jiro Taliye ku-xigeenka saldhigga Cabdullaahi Biixi Mataan, oo uu ku sheegay inuu soo gaaray Dhaawac fudud, waxa uuna Weerarka wakhti ay Ciiddamadda Ammaanka muujinaayeen habacsanaan dhanka amaanka ah, iyadoona Raggii weerarka geystay ay goobta ka baxsadeen.
Si kastaba ha ahaatee, Askarta dhaawacantay ayaa waxaa iminka dhaawacyadooda la dhigay isbitaalka magaalada Gaalkacyo, halkaas oo lagu daweynayo, sida ay saraakiisha caafimaadku sheegeen.
Dowladaha ku jira Ururka Gacanka Carabta oo cambaareeyey qarixii Muqdisho